Semalt: GrabzIt Intshayelelo. Izindlela ezahlukeneyo zokusebenzisa i-GrabzIt
iinkqubo zokukhutshwa kwedatha kwi-intanethi. Nangona kunjalo, ukutshintsha idatha kwiifayile ezahlukeneyo ze-PDF kunye namaphepha ewebhu akuzange kube lula njengoko kunjalo ngoku! Nceda uthande kwaye uthandeke, i-GrabzIt - enye yezona zixhobo ezisemgangathweni kunye ezidumileyo kwi-web.
Zinendlela ezine eziphambili zokusebenzisa le sixhobo le-web scraping:
1. Sebenzisa i-API yayo:
Ungasebenzisa API ukudibanisa iimpawu kunye neenkonzo kwi-GrabzIt yakho kwisicelo sakho okanye kwiwebhusayithi - boat us appraisal. Oku kukuvumela ukuba ufumane ama-skrini, uthathe amacwecwe e-HTML, kwaye uguqula iividiyo ze-intanethi zibe yi-GIF eziphathekayo. Ungasebenzisa kwakhona i-API ukukhipha idatha kwi-Word kunye namaxwebhu e-PDF.
2. Sebenzisa isixhobo sawo soKhuseleko lwe-intanethi:
Ukuba ukhangele ukudala imisebenzi ehleliweyo, ufuna ukuthabatha ezinye izikrini, okanye wenze izicwangciso zokubamba iitafile ze-HTML, i-Grabz. yeyakho. Ukhetho lwayo olusisigxina lomsebenzisi kunye nolulungekileyo lwe-intanethi likuvumela ukuba uthathe kwaye ulondoloze ama-skrini ngaphakathi kwimizuzu.
3. Sebenzisa iiplagizi:
Ungasebenzisa i-plugin ye-GrabzIkudibanisa izixhobo eziqhelekileyo ezenziwe ngaphambili kwisayithi lakho, iblogi okanye inkqubo yolawulo lwezinto.
4. Sebenzisa i-extractor yewebhu okanye ukhetho lokumbiwa kwedatha:
Enye indlela yokuzuza kwi-GrabzIt ukusebenzisa i-extractor yewebhu okanye inkcazelo yokumbiwa kwedatha kwaye ukhupha nayiphi na idatha kwifomathi oyifunayo..
1. Ukuchonga iiwebhusayithi ezijoliswe kuyo:
Nge-GrabzIt, kulula ukuba ufumanise ithagethi kumaphepha ewebhu. Kuphela kufuneka ulande, faka kwaye usebenze le web iwebhu kwaye uchaze iwebhusayithi okanye icandelo lebhulogi ofuna ukuyifumana. Emva koko, kufuneka ucebise xa ufuna ukuba idatha yakho ikhethwe kwaye uvumele i-GrabzIt yenza konke.
2. Cacisa idatha ukuba ikhuphe okanye ihluthe:
Kubalulekile ukuchaza indlela ofuna ukuba idatha yakho ihlelwe ngayo ukuze iGrabzIsindise utshintsho ngokufanelekileyo.
3. Iphakheji idatshulwa idatha:
Oku kubandakanya ukuchaza indlela ofuna ukuba idatha yakho ifakwe ngayo kwaye idluliselwe. I-GrabzIyakunceda ukupakisha idatha yakho okanye umxholo wewebhu ngendlela engcono.
Luhlobo luni lwedata olunokutsalwa?
I-GrabzIyakwazi ukurhweba idatha kunoma iyiphi inxalenye yephepha lewebhu. Ingaba ufuna ukukhupha umxholo wezinto ze-HTML (njenge-span kunye ne-div), ufuna ukufumana iimpawu ze-HTML, okanye unomdla wokugcina umbhalo kwifomathi okanye ifomathi yomfanekiso, kufuneka usebenzise i-GrabzIt!
njani le webhuthi isebenza?
Kukuvumela ukuba ukhethe okanye ugxininise izinto zekhasi lewebhu onokukhipha. Xa usukhethile indawo, i-GrabzIt izakudala imibhalo eqhelekileyo eqhelekileyo kwaye ihlule yonke into ekhoyo kuwe. Kukwavumela ukuba usebenzise iipateni kwaye udala amazwi rhoqo kwi-backend, ukufumana iziphumo ezifunwayo.
Idatha ifumaneka ngendlela ye-Excel, i-CSV, i-JSON, i-XML, i-SQL kunye ne-HTML, kwaye ungayigcina le datha mhlawumbi kwi-MySQL okanye kwi-SQL iseva. I-GrabzIza ne-wizadi edibanisa i-intanethi kwaye yenza ngokuzenzekelayo imiyalelo yento ekufuneka uyihlasele kunye nokuba yintoni ekufuneka uyihlasele. Awudingi naziphi na iinkqubo zokubhala okanye zokubhala kwiikhompyutha ukuze ufumane kakuhle kule software.